Ku soo dejiso joornaalada bilaash ah: 3da bogag ee ugu fiican Isbaanishka | Wararka Gadget
Ku soo dejiso joornaalada bilaash ah: 3da bogag ee ugu fiican Isbaanishka
Paco L Gutierrez | | La cusboonaysiiyay 07/10/2020 02:00 | Akhristayaasha, General
Da'da dhijitaalka waa xaqiiqo, wanaag iyo xumaanba. Waa xaqiiqo la xaqiijiyey in saxaafadda yar iyo tan ka yarba loo cuno qaab muuqaal ah, maaddaama internetku yahay isha ugu weyn ee macluumaadka lagu beddelayo hal guji ama raadin. Weli jira farxadaas aan ku aqristo wargeys aamusnaan miiska maqaayada intaanu ku raaxaysanayno kafeegayada ama quraacdeenna. Laakiin waxaa sii kordheysa wax iska caadi ah inaad yeelato isla goobtaan isla taleefan casri ah oo hal gacan ah iyo mid kale oo kafee ah.
Waxaan si fiican u xasuustaa markaan u aaday kiosk-kayga aan ku kalsoonahay anigoo xamaasad u leh joornaalada ciyaaraha fiidiyowga ah ee aan ugu jeclahay maxaa yeelay marka lagu daro inay yihiin isha kaliya ee macluumaadka laga helo, waxay siiyeen demo ama boodhadh aan hadhow qolka jiifka ku laalaadno. Laakiin hadda demosyada waxaa loo qaybiyaa si elektaroonik ah oo aan qiimo lahayn, oo leh weyn Faa'iidada in la cusbooneysiiyo daqiiqad kasta. Si kastaba ha ahaatee, warqadda, haddii ay ku jiraan wax war qaldan ah, waan hayn doonnaa macluumaadkaas illaa qaybta xigta. Qodobkaan waxaan ku arki doonnaa goobaha ugu wanaagsan ee lagu soo dejisan karo joornaalada bilaashka ah.
1 Faa'iidooyinka akhriska dhijitaalka ah
2 Sida loo soo dejisto joornaalada si bilaash ah
4 PDF Majalado
6 Goobta ugu fiican ee lagu soo dejiyo joornaalada cayaaraha
7 Goobta ugufiican ee looga soo dejisto majaladaha qalbiga
Faa'iidooyinka akhriska dhijitaalka ah
Faa'iidada ugu weyn ee qaabkani waa ku-habboonaanta aan ku xirnayn dukaan yar, iyo sidoo kale booska aan ku keydinno keydinta. Ma ilaabi karno sidoo kale saameynta deegaanka ee yareynta isticmaalka warqadda Qaabka noocaas ah, wax umuuqda in aysan macno lahayn, laakiin wax badan ayey macno weyn uleedahay maxaa yeelay warqadu waa wax wanaagsan oo lama huraan ah hadii aan wax yar keydin karno, meeraha ayaan sifiican usameynaa.
Ma iloobi karno raaxada haysashada joornaaladayaga dhamaan qalabkeena, meel kastoo aan joogno, laga bilaabo taleefannadeenna casriga illaa iPad-kayga. Iyadoo la raacayo buug-gacmeed ballaadhan oo aan ku arki karno joornaal kasta oo na xiiseynaya. Ku dhowaad qalab kasta wuxuu leeyahay akhristaha PDF, kaas oo ah qaabka ugu badan ee loo isticmaalo nooca noocan ah. Waxay ku mashquulsan tahay wax aad u yar sidaa darteed uma baahnid inaan ka walwasho keydka aan ku hayno aaladdayada. Xitaa waxaan u geyn karnaa daruurta si aan u galno joornaalada adigoon dib udajisan.
Sida loo soo dejisto joornaalada si bilaash ah
Raadinta fudud ee Google waxay na siineysaa marin kumanaan ilo ah oo aan kala soo baxno faylasha PDF ee joornaalada. Laakiin marwalba waxaan qabnaa shaki ama cabsi ah inaanan si sax ah u ogeyn waxa aan soo dejineyno, in kastoo haddii aan leenahay antivirus wanaagsan, way na soo ogeysiin doontaa haddii aynaan soo degsan wixii aan runtii dooneyno inaan soo dejino. Qaar ka mid ah boggagani waxay fursad u helaan inay ku dhuuntaan qaar ka mid ah qalabka wax lagu dhejiyo ama kordhinta biraawsarka, sidaa darteed waa inaan ka taxaddarnaa haddii aynaan doonaynin waxqabadka biraawsarkayaga inay saameyn ku yeeshaan adoo rakibaya wax aynaan ahayn.
Sababtaas awgeed waxaan sameyn doonnaa xulasho degello ah oo aan kala soo bixi karno joornaaladayaga oo aan khatar la gelin. Dhammaantood waxay leeyihiin buug-gacmeed ballaadhan oo lagu soo dejisto majaladaha ama buugaagta. Si aan u soo degsano iyaga ayaa kaliya u baahan inaan marinno shabakadda oo aan doorano feylka, ama toos u soo degso ama u soo dhigno barnaamijka Torrent ee webka laftiisu ku talinayaan.
Websaydhka ugu horreeya ee aan ka hadlayno, Kiosko.net waa adeeg asal ah oo fudud oo saxaafadeed. Waa adeeg biyo xireen toos ah kaas oo laga daawan karo daboolka ugu muhiimsan ee joornaalada iyo joornaalada adduunka. Naqshadeynta ayaa ah fikrad asal ah oo soo saaraha Hector Marcos waana mid aad u shaqeynaya.
Bogga ugu weyn waxaan ka helnaa 5 wargeys oo ka kala socda qaarad kasta, dhammaantoodna ku jira noocyadooda Ingiriisiga iyo Isbaanishka. Daboolka ayaa lagu weyneyn karaa iyadoo la dhaqaajinayo tilmaamaha jiirka meel u dhow. Intaas waxaa sii dheer, waa la ballaarin karaa mid kale haddii aan gujino daboolka gujimaha ugu weyn. Haddii aan mar kale gujino, waxay nagu qaadan doontaa isku xirka wargeyska su'aasha laga qabo.
Waxaan ku haynaa xul ballaaran oo saxaafadeed qoran Spain, kuwaas oo aan ka helno dhowr nooc oo aan ka soo xulano. Iyaga ka mid ah "Wargeysyada Maalinlaha ah", "Joornaalada", "Majaladaha Kumbuyuutarka", "Majaladaha dhaqanka" iyo kuwa kale oo badan. Qeybaha ugu caansan waxaan sidoo kale ka helnaa joornaalada isboortiga iyo joornaalada qalbiga oo shaki la'aan ah kuwa ugu badan ee ay dalbadaan guud ahaan bulshada.
Waa inaan sheegaa in boggan uu ila muuqdo mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan ka heli karno internetka, maadaama aysan noo oggolaaneyn oo keliya inaan dib u eegno dhammaan saxaafadda ku hadasha Isbaanishka, laakiin sidoo kale waxay na siisaa marin u helka dhammaan saxaafadda shisheeye, marka hadaan afaf garano, waan la socon doonnaa wax walboo dunida ka dhaca.
Shaki la'aan kani waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn waaxda marka la eego aqrinta saxaafadda, laakiin xaaladdan inteeda badan waxyaabaha ku jira oo dhan waa Ingiriisi. Waxay leedahay buug-yare ballaaran oo aan ka heli karno saxaafadda ku saabsan mawduuc kasta. Thanks to mashiinkeeda raadinta ee awooda badan waxaan heli doonaa wax alla wixii aan raadineyno, inkasta oo sidaan idhaahdo, natiijooyinka badankood ay kuqoran karaan Ingiriis.
Dabcan, waxaan ku dari karnaa miirayaasha baaritaanka la yiri, waxaa ka mid ah miiraha luuqada, marka hadaan kaliya raadino luqad gaar ah, waan heli doonnaa. Shaki la'aan waa mid ka mid ah bogagga shabakadaha saxaafadda ee ugu dhameystiran PDF-ka. Laakiin shaki la’aan Way dhici kartaa haddii aan kaliya ka raadinno joornaalada Isbaanishka.
Waxaan haynaa waxyaabo badan oo ka socda joornaalada cayaaraha ama joornaalada xanta, in kasta oo laga yaabo inaysan cusbooneysiin haba yaraatee, markaa haddii aad raadineyso inaad haysato kii ugu dambeeyay ee Isbaanishka, Kiosko.net hubaal waa xulasho ka wanaagsan tan.
Waxaan ku nimid waxa aniga ila ah websaydhka ugu toosan dhammaan, sida ugu dhakhsaha badan markaan soo galno waxaan kaheleynaa qoraalladii ugu dambeeyay, ee kujira waxaan ka helnaa joornaalada ciyaaraha, wadnaha, mootada, iyo kuwo kale. Magaca magaca websaydhka ayaa soo jeedinaya in kiiskan ku dhowaad dhammaan waxyaabaha ku jira ay ku qoran yihiin Isbaanish, laakiin dhibaatada websaydhkan ayaa ah in inta badan waxyaabaha ay ka kooban tahay ay yihiin kuwo waqtigoodu dhammaaday. Helitaanka joornaalada 2016 oo ka mid ah kuwa ugu caansan jeldiga.
Haddii aad raadineyso inaad aqriso wax aan waqti lahayn, shaki la’aan waad keydin kartaa joornaallo kaladuwan oo kaladuwan, kuwaas oo aan ku raaxeysan karno kala-takoor la'aan ku meel gaar ah Ka mid ah tabsyada ay tahay inaan dooranno waxyaabaha ku jira, waxaan ka helnaa qaybta qorayaasha, noocyada iyo taxanaha. Waxaan helnaa ku dhowaad joornaal kasta oo aan ka fikiri karno, oo ay ku jiraan majaajillada ama buugaagta cuntada lagu kariyo.
Goobta ugu fiican ee lagu soo dejiyo joornaalada cayaaraha
Shaki la'aan taladeenu waa Kiosko.net, maxaa yeelay waa suuq malaayiin dollar ah, boggag badan ayaa la xiray, sidaas darteed dalabku wuu xadidan yahay. In kasta oo Kiosko.net aan ka helno wax kasta oo aan qiyaasi karno annaga oo tixraacayna isboortiga. Dhamaan waxa ugu fiican, boggan waa mid gebi ahaanba sharci ah, sidaa darteed maahan inaan walwalno.
Waxay noo ogolaaneysaa inaan soo dejino cinwaanno fara badan, kuwaas oo aan ka heli karno kubbadda cagta, mootooyinka, teniska, kubbadda koleyga ama ciyaaraha fudud. Buugga buugga ayaa xoogaa ku xaddidnaan kara shaygan aan hore uga soo faalloonnay, laakiin innaga oo tixgelinayna inay gebi ahaanba bilaash tahay, kuma dulsaari karno cillado badan.
Goobta ugufiican ee looga soo dejisto majaladaha qalbiga
Ugu dambeyntiina waxaan ka bixin doonnaa tixraacyo ku saabsan soo dejinta PDF-ka oo ah hal-ku-dhegga wadnaha, oo ah mowduuc marwalba ku soo kordha dalkeenna. Shaki la'aan majaladaha qalbiga ayaa xaaqay daasaska, iyagoo ka mid ah kuwa yar ee iyagu sii nooleeya. Joornaalada sida Hola, Cosmopolitan, interviú ama Clara waxay ka mid yihiin kuwa ugu caansan.
Waxaan kugula talineynaa PDF Giant, bogga oo leh buug-yaraha ballaadhan ee mawduucan, kana dhigaysa mid ka mid ah bogagga loogu taliyo. In kastoo aniga shaqsiyan ay tahay inaan dhaho taas Weli waxaan doorbidayaa Kiosko.net. In kasta oo xulashooyinka badan ee aan haysanno ay ka sii fiican yihiin, maadaama tan laga heli karo inay dhacdo mararka qaarkood, sidaa darteed had iyo jeer way wanaagsan tahay in la helo tiro badan oo fursado ah oo la heli karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Ku soo dejiso joornaalada bilaash ah: 3da bogag ee ugu fiican Isbaanishka
Amazon Fire TV Cube, dhamaan awooda telefishankaaga [Falanqaynta]
Xellence by X by Kygo, oo leh ANC iyo dhawaq cajiib ah